I-Borealis Wilderness Lodge, Chalet
Wamukelekile ukuthi uhlale e-Chalet yethu, okunethezeka okungene ekujuleni kwehlane lase-Europe elihle neliyihlane.... Sisenyakatho yeSweden, ukubusa kwe-Northern Lights noma kwelanga laMidnight. Ekhaya kumaSami....Buka izithombe!
I-Chalet yokhuni yendabuko enhle ejule emathafeni asenyakatho yeSweden: vele uphume emnyango futhi unamamayela e-ski noma izindlela zokuhamba izintaba, noma ugibele isikebhe noma uhlole iSarek National Park edumile amasonto! Ilungele ochwepheshe kanye nomama abanezingane!!!
Singase sibe lapha ukuze sikwamukele futhi sikusize, kodwa hhayi phakathi nawo wonke unyaka!